ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသော မြန်မာအလုပ်သမား ၁၆ ဦးကို ထိုင်းဘက်မှ မြဝတီသို့ လာရောက်?? - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသော မြန်မာအလုပ်သမား ၁၆ ဦးကို ထိုင်းဘက်မှ မြဝတီသို့ လာရောက်??
မြဝတီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈- ထိုင်း နိုင်ငံ၌ လူကုန်ကူးမှုခံခဲ့ရသော မြန် မာအလုပ်သမားများအား ထိုင်းနိုင် ငံမှ တာဝန်ရှိသူများက မြန်မာ- ထိုင်းနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝ တီမြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်ရှိ ပြန် လည်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက လာရောက်လွှဲပြောင်းပေး အပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ လူကုန် ကူးခံရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား အမျိုးသား ၁၄ ဦး၊ အမျိုးသမီးနှစ် ဦးကို ထိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီနေ့လာရောက်လွှဲပြောင်းပေး အပ်ပေးတာပါ။ သူတို့ကိုမော်လ မြိုင်ကို ဒီနေ့ခေါ်သွားပြီး လူငယ် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ သုံး ရက်ထားပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက် မှုတွေကို သက်ဆိုင်ရာက စိစစ် ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ရဲ့နေရပ်ကို ချောမောစွာ ရောက်ရှိအောင် အခမဲ့ပို့ဆောင် ပေးသွားမှာပါ” ဟု မွန်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောကြား သည်။
အဆိုပါအလုပ်သမားများ လွှဲပြောင်းရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ နှစ် ၂ဝ ခန့်နေထိုင်၍ ဘန်ကောက်မြို့ အနီး ပြောင်းစက်ရုံတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ရင်း ညာဘက်လက်တစ် ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ပဲခူးမြို့မှ ဦးရန်မျိုး အောင် (၅ဝ) နှစ်အား ထိုင်းအလုပ် ရှင်မှ နစ်နာကြေးဘတ် ၆ဝဝဝဝဝ ကိုလည်းကောင်း၊ ¤င်း၏ဇနီးဖြစ် သူ မတီပိုး (၄၆) နှစ်အား ထိခိုက် နာကျင်မှုနစ်နာကြေး ဘတ် ၃ဝဝဝဝဝ ကိုလည်းကောင်း ထိုင်းမှတာဝန်ရှိ သူများက ကိုယ်စားပေးအပ်ခဲ့သည်။
”ကျွန်တော်က ထိုင်းကိုပွဲစားခ ဘတ် ၂၂ဝဝဝ ပေးပြီး ကော့သောင်း ဘက်ကနေ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်လလောက်အကြာမှာ ထိုင်း ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ်ကနေ ဖမ်းဆီး ခံရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကစောင့်ရှောက် ရေးဂေဟာတွေမှာ ခြောက်လ ကြာစောင့်ရှောက်ခံထားရတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့မြဝတီမြို့ကို ပြန် လည်ပို့ဆောင် ပေးခဲ့တာပါ။ အမှန် တော့ ကျွန်တော်တို့ကို ထိုင်း ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ် ရောင်းစား ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်မှ ကိုလှသန်းကပြောသည်။
အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယရဲချုပ် မစ္စတာဝိ ချာလာရနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန် မာနိုင်ငံ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း၊ မွန်ပြည်နယ်လူမှု ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေး မှူး ဦးကိုကိုနိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူ များ၊ မြဝတီခရိုင်မှ တာဝန်ရှိသူ များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှဦးဆောင်၍ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးသော မွန်ပြည်သစ??
မော်လမြိုင်မြို့နယ် ကျွဲခြံကုန်းကျေးရွာတွင် မီးအားမြှင့်စက် အပူလွန်ကဲရာမှ ဝိုင်ယာရှော့ခ??
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီး မီးလောင်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ အဂတိလိုက်စားကြောင်း အထောက်အထား ခ
ကေတီပယ်ရီနှင့် ဇတ်ဒ်တို့ ပူးတွဲ ဂီတခရီးပြုလုပ်မည်
ဗစ်တိုးရီးယားဗက်ခမ်းက အလုပ်လုပ်သော မိခင်များအတွက် အကောင်းဆုံး အကြံများ ပြောပြခဲ့